PressReader - Ilanga: 2018-11-29 - INSIKA MAKHOSI ZULUZONDO
INSIKA MAKHOSI ZULUZONDO
Ilanga - 2018-11-29 - Izindaba -
NGOKUJWAYELEKILE, izingane ezitholakale ebusheni babazali bazo, zivamise ukuba yizisulu zezinhlobo eziningi zokuhlukumezeka, ikakhulukazi emiphefumulweni.
Kuningi okwenziwa ezinganeni ezizalwe ngabazali abasebancane futhi bezizala bengenanhloso ngazo, yingakho zingavamisile ukuvikelwa ngokwanele. Imvamisa lezi zingane zihlukumezeka futhi zilahlwe zingakazalwa ngisho nokuzalwa.
Uthola ukuthi unina wengane ngalesi sikhathi esayikhulelwe, usuke enentukuthelo yokuthi uzoba nengane angayihlelelanga, kwesinye isikhathi uthole nokuthi uyise uyiphikile okanye uthe uyobona ngayo isizelwe. Lokhu kudala ukuba unina oyithwele abe nezinto eziningi ezimbi azicabanga ngayo.
Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyise wengane uthi masihushulwe isisu ngoba akakakulungeli ukuba ngubaba futhi akazimisele ngokondla.
Uthole ukuthi unina wengane ubengacabangi ngaleyo ndlela, agcine eseyigcina ingane, kodwa uthando lwayo engasenalo ngoba ephoxwe nguyise wayo.
Zonke lezi zinselelo ziyingcindezi kunina wengane nakuyona uqobo ngoba kayikho into enhle esuke ishiwo ngabazali bayo kuyona - imane ilahlwe ingakazalwa ngisho nokuzalwa.
Ithi iqambe ifika emhlabeni, ivele isinesigcwagwa, yafana neqalekisiwe. Kuthanda ukuba yinselelo ngempela enganeni ukuba izalwe ingahlelelwanga ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi kulula nje ukuba ibandlululeke ngisho isikhulile ngoba zisuke sezizelwe eziyelamayo, ezihlelelwe futhi ezinoyise abazinakekelayo.
Kwesinye isikhathi uthola lapho ize itshelwe khona ukuthi “wena uyihlo akakwenzeli lutho wondliwa uyise kasibanibani”. Lokho kuyisilonda esingapholi emoyeni waleyo ngane, ikhula yazi ukuthi yona kayinamhlaba futhi kayilutho.
Ngiyafisa ukuba abazali bake bayibuke le nto nomthelela wayo bawubhekisise ngoba ekugcineni akube kusaba khona oxolisayo kule ngane emane yathelwa ngesigcwagcwa engasicelanga.
Uma sithola ithuba sithintwa nawunembeza, bekungaba kuhle sizixolele thina siphinde sixolise nakubona abantwana bethu esibathele ngehlazo lokunganakwa.
Makhosi Ndleleni uMaZulu- Zondo Insika( isigodlol) UThishanhloko waseMatatane Secondary School [email protected] Utholakala kwethi: 082 752 7342
UNKK Hlaleleni Buthelezi ongusihlalo weXhiba Co-operative, uthi ukutshala ngalolu hlelo abalusebenzisayo kuyonga kakhulu ngoba kakudingi amanzi amaningi.